I-Liraglutide: Umuthi Omuhle Wokwelapha Isifo Sikashukela Sesifo Sikashukela i-2 ne-Ukukhuluphala
I-Liraglutide: Umuthi Omuhle Wokwelapha Isifo Sikashukela Sikashukela 2 Futhi Ukukhuluphala
I-2. Isakhiwo se-Liraglutide
I-3. Isibonakaliso se-Liraglutide
I-4. Indlela yokusebenza ye-Liraglutide
I-5. Imiyalo Yokuphatha Nezokuphatha yeLiraglutide
I-6. Iziphi izinzuzo zeLiraglutide?
I-7. Kufanele unakekele imiphumela elandelayo / isixwayiso lapho usebenzisa i-Liraglutide
I-8. Ukusebenzisana kwe-Liraglutide
I-9. Isipiliyoni Somtholampilo
I-Liraglutide (204656-20-2) umuthi othengiswa ngaphansi kwamagama ohlobo lomkhiqizo ezingxenyeni ezihlukene zomhlaba, ezisetshenziselwa izinhloso zokwelapha ezahlukahlukene. Amagama omkhiqizo weLiraglutide ajwayelekile emakethe namuhla yiVictoza neSaxenda. I-Liraglutide isebenzisa incike kumkhiqizo owuthenga, ngokwesibonelo, i-Victoza isetshenziswa kakhulu ngokuzivocavoca okufanele nokudla ukuze uqinise ukulawulwa kweshukela egazini kubantu abadala bese uthayipha i-mellitus yesifo sikashukela se-2 ezinganeni ezineminyaka okungenani eyishumi. Ngaphezu kwalokho, iVictoza ibonakalise futhi ukuthi ibalulekile ekunciphiseni ubungozi bezinkinga zenhliziyo njengokushaywa unhlangothi noma ukushaya kwenhliziyo kubantu abadala abanezifo zenhliziyo kanye nohlobo lwe-2 sikashukela.
Ngokolunye uhlangothi, Saxenda, okubuye kube nolunye uphawu lweLiraglutide, isetshenziswa ngokudla okufanele nokuzivocavoca ukusiza abasebenzisi ukunciphisa umzimba lapho behlushwa yizimo zezempilo ezahlukahlukene. Naphezu kokuba igama lomkhiqizo le-Liraglutide, iSaxenda ayisetshenziselwa ukwelapha uhlobo lwe-1 noma thayipha isifo sikashukela kabili, futhi futhi akusona isifiso sokudla noma isengezo sokulahlekelwa isisindo. Udokotela wakho angancoma futhi I-Liraglutide iyasebenzisa ngezinye izizathu ezingafakwanga kulo mhlahlandlela. Kodwa-ke, kungcono ukuthi ngaso sonke isikhathi uthole umthamo ofanele we-Liraglutide kudokotela wakho ukuze uthole imiphumela engcono.
I-Liraglutide iyathengiswa etholakala ezitolo ezahlukahlukene eziku-inthanethi nakumakhemisi asemzimbeni, kepha kufanele njalo uqaphele ngomthombo wakho. Njalo yenza ucwaningo olufanele ukuqinisekisa ukuthi uthola isidakamizwa sakho kumthengisi othembekile nonolwazi. Ikhwalithi yemithi oyiphuzayo inomthelela emiphumeleni ozoyithola ekugcineni komjikelezo womthamo. Izindleko ze-Liraglutide zingahlukahluka ukusuka emthonjeni othile ziye kwesinye kodwa qiniseka ukuthi uthola ikhwalithi enhle kakhulu. Uma ungaqinisekile ngomthombo, thintana nomuthi wakho.
2. Isakhiwo se-Liraglutide
Amakhemikhali, Isakhiwo se-Liraglutide senziwa nge-peptide ende enamafutha eyenziwe nge-glucagon efana ne-peptide ephethwe ngokungagcwele kanye nomsebenzi we-antihyperglycemic. Isenzo esisebenza isikhathi eside salo muthi sibangelwa yi-fatty acid, kanye nokuamathiselwa kwe-Palmitic acid ku-GLP-1, ehlangana kalula ne-albhamuin. Ukubopha kwe-albhamuin kudlala indima ebalulekile ekuvikeleni i-Liraglutide ekucekelweni phansi ngokushesha uma uthatha imithamo yakho, futhi ngenxa yalokho, kuholela ekukhululweni okungaguquguquki futhi okuhamba kancane kwe-GLP-1. Lokhu kuqinisekisa ukuthi uthola imiphumela oyifunayo kungakapheli isikhathi esifushane kakhulu.
3. Isibonakaliso se-Liraglutide
I-FDA igunyaze bobabili iVictoza neSaxenda yokwelashwa kwezimo zezempilo ezahlukahlukene e-United States of America. Njengoba kushiwo ngaphambili, uVictoza uvunyelwe ukwelashwa kwezinkinga zenhliziyo kanye nokuthayipha isifo sikashukela i-2. Kuyaziwa nangokwehlisa izimpawu zesisu njengokuhlanza, isicanucanu, nohudo. ISaxenda nayo yavunywa yi-FDA ukusiza ekwelapheni ukukhuluphala kanye nokulawula isisindo somzimba. I-Liraglutide kufanele ithathwe lapho ufuna ukunciphisa izinkinga zenhliziyo ezibangelwa izifo zenhliziyo noma uhlobo lwe-2 sikashukela mellitus. Futhi, uma ufuna ukulawula isisindo somzimba wakho obangelwa uhlobo lwe-2 sikashukela mellitus, ukukhuluphala kweLiraglutide kuzoba umuthi omuhle kakhulu kuwe. Ukukhuluphala kwe-Liraglutide kusize nabasebenzisi abaningi ukuphatha isisindo sabo. Noma uhlangabezana nezimpawu ezingalashwa nge-Liraglutide powder, ungasiphuthi lesi sidakamizwa ngaphandle kokuxhumana nochwepheshe wezempilo. Kodwa-ke, khumbula ukuthi udokotela wakho angakunikeza lesi sidakamizwa ukuthi usisize ekwelapheni noma yisiphi esinye isimo sezokwelapha esingafakwanga kulesisihloko.
4. Indlela yokusebenza ye-Liraglutide
Ezimweni eziningi, iLiraglutide isebenza ngokuya ngalokho ofuna ukukufeza ekupheleni komjikelezo womthamo. Isibonelo, indlela ye-Liraglutide yesenzo sabantu abathatha i-liraglutide umthamo wokunciphisa isisindo ihlukile kubasebenzisi abayisebenzisela ukwelashwa kohlobo lwe-mellitus yesifo sikashukela se-2. Amagama womkhiqizo weLiraglutide womabili UVictoza noSaxenda zisebenza ngokuhlukile uma zingena ohlelweni lomzimba wakho.
Isibonelo, i-Liraglutide ukukhuluphala (i-Saxenda) isebenza ngokucindezela ukukhiqizwa kwama-appetite amahomoni (i-glucagon-like-peptide noma i-GLP-1) emzimbeni wakho, olawula indlala yakho. Okwamanje ukukhiqizwa kwe-GLP-1 kwehle, isifiso sakho sokudla sizokwehla futhi sigcine ngokudla amakhalori ambalwa, futhi ngokuhamba kwesikhathi, wehlise isisindo somzimba. Amakhalori abhekene nesisindo sakho somzimba, futhi uma ungawalawula, kuzoba lula kuwe ukuthi uchithe amakhilogremu athile.
Ngakolunye uhlangothi, uVictoza usebenza ngezindlela ezintathu ezihlukene ukuletha imiphumela ayithenjiswe ngumenzi wezidakamizwa. Okokuqala, uVictoza usebenza ngokunciphisa ijubane lokudla elishiya isisu sakho, elilawula amazinga kashukela egazini emzimbeni wakho. Yize inqubo efanayo, umuthi futhi uvimbela isibindi sakho ukukhiqiza ushukela omningi. Okokugcina, iLiraglutide, okuyisakhi esiyinhloko kwiVictoza, futhi ivuselela ama-pancreas akho ukuthi akhiqize i-insulin eningi lapho amazinga kashukela egazi ephezulu. Umuthi uthuthukisa yonke le misebenzi ngokuqinisa ukusebenza kwamaseli we-beta. Amangqamuzana asiza ekulawuleni ushukela wegazi ngokukhulula i-insulin, evimbela amazinga kashukela ohlelweni lwakho lomzimba. Isisusa sokukhiqizwa kwe-insulin emzimbeni wakho yisizathu esiyinhloko esenza iVictoza isetshenziswe ikakhulukazi ekwelashweni kwe thayipha 2 sikashukela mellitus.
5. Imiyalo Yokuphatha Nezokuphatha ye-Liraglutide
I-Liraglutide iyasebenzisa ziyehluka kusuka komunye umsebenzisi ziye kwesinye ngokuya ngesimo sempilo eselashwa. Umthamo wezidakamizwa kufanele ubekwe ngudokotela wezempilo ngokuya ngesimo eselashwa. Izingane ezingaphansi kweminyaka eyishumi azelulekwa ukuthatha lesi sidakamizwa, ngoba singaziveza imiphumela emibi kakhulu. Imizimba yabantu ihlukile, yingakho kungakuhle njalo ukuthi uye kohlolwa udokotela ngaphambi kokuthi uqale uthathe noma yisiphi isidakamizwa. Yize iLiraglutide iza nemiyalo yemithamo ephakanyiswe ngumenzi, kwesinye isikhathi ingahle ingasebenzi kuwe. Udokotela ungukuphela komuntu ofanele ukukusekela isilinganiso esifanele se-Liraglutide ngemuva kokuhlola isimo sakho sempilo.
I-Liraglutide yisidakamizwa esingavinjelwa okufanele sikhishwe engalweni yakho ephezulu, esiswini, noma ethangeni. Akunasikhathi esibekiwe sokuthi ungaphuza umthamo wakho we-Liraglutide, kepha ungayidla noma ungadli. Ungahlala ujikelezisa amasayithi womjovo we-liraglutide ukunciphisa imiphumela emibi noma izinhlungu ongazizwa endaweni. Isikhathi sokuphatha umthamo singashintshwa kahle ngaphandle kokulungisa umthamo osethiwe. Kungcono ukuthi uhlole njalo Umjovo we-Liraglutide ngombono; kufanele uthathe umjovo wakho kuphela lapho isixazululo singenamabala, sicacile, futhi singenazinhlayiya ezibonakalayo. Uma kwenzeka isixazululo sakho sivela noma yimuphi umbala ongavamile, ungasithathi ngaphandle kokubonisana nodokotela wakho.
Umthamo we-Liraglutide powder uzoncika ekubekezelelekeni komzimba wakho, ubudala kanye nesimo sempilo eselashwa.
Uhlobo lwesifo sikashukela i-2
The initial I-Liraglutide powder (204656-20-2) umthamo kubantu abadala yi-0.6mg, okufanele ithathwe kanye ngosuku ngeviki elilodwa. Ngemuva kweviki elilodwa, umthamo ungashintshwa ube yi-1.2mg ngokucashile kanye ngosuku, futhi uma ungafinyeleli ukulawulwa kwesifo, udokotela wakho angangezela umthamo ukuya ku-1.8mg ngosuku. Umthamo wokulungiswa kweLiraglutide kufanele ube phakathi kwe-1.2 ne-1.8 mg ngosuku. Kodwa-ke, umthamo omkhulu yi-1.8mg ngosuku.
Umthamo wokuqala we-0.6mg ngosuku uhloselwe ukunciphisa izimpawu zesisu okuvela ekuqaleni kokuqalwa kokulashwa futhi awunakuba namandla anele okulawula i-glycemic. Kodwa-ke, i-Liraglutide ayiyona indawo ye-insulin futhi iziguli ezinesifo sikashukela se-1 sikashukela noma i-ketoacidosis yesifo sikashukela akufanele siyithathe. Uma uqala lokhu kwelashwa, cabanga ukunciphisa i-insulin secretagogue ukunciphisa ingozi ye-hypoglycemia.
Ukuncipha kwengozi yenhliziyo
Umthamo wokuqala we-Liraglutide wabantu abadala abanezinkinga zenhliziyo yi-0.6mg ngosuku futhi kufanele uthathwe ngeviki lokuqala. Umthamo kufanele wenyuswe ube yi-1.2mg ngosuku ngesonto elilandelayo, futhi uma ungafinyeleli ukulawulwa kwe-glycemic, udokotela wakho kufanele akhuphule umthamo ukuya ku-1.8mg ngosuku. Kodwa-ke, ngesikhathi I-Liraglutide powder umthamo ukhushulwa ufike ezingeni eliphezulu, uzobe usuthole imiphumela oyifunayo. Umthamo wokulondolozwa kufanele ube phakathi kwe-1.2mg ne-1.8mg ngosuku, kuyilapho umthamo omkhulu wabantu abadala yi-1.8mg ngosuku.
I-Liraglutide umthamo wabantu abadala wokunciphisa noma ukukhuluphala
The ukunciphisa isisindo se-liraglutide ukukhuphuka komthamo kufanele kunamathelwe, ukunciphisa amathuba okuba nezimpawu zesisu. Ukulungiswa komthamo kungabambezeleka isonto elingeziwe ukuthola imiphumela engcono. Kodwa-ke, udokotela wakho kufanele akuqondise kule nqubo. Umthamo wokuqala lapha yi-0.6, okufanele ithathwe ngokungaziphathi kanye ngosuku. Esontweni lesibili, umthamo ungandiswa ube ngu-1.2mg ngosuku; ngeviki lesithathu, umthamo ungaphakanyiswa uye kwi-1.8 ngosuku. Esontweni lesine, umthamo kumele futhi unyuswe uye kwi-2.4mg kanye neviki lesihlanu uye kwi-3mg kanye ngosuku. Kodwa-ke, udokotela wakho uzokuhola ukuthi ungawuthuthukisa kanjani futhi nini umthamo.
Umuthi wokulungisa lapha yi-3mg kanye ngosuku, kepha uma umzimba wakho ungakwazi ukukubekezelela, udokotela angakucebisa ukuthi uyeke umthamo. Ukulawulwa kwesisindo esingamahlalakhona usebenzisa lo muthi kutholwe kuphela ngemithamo ephezulu. Uma ukhuluphele, uhlobo lweSaxenda Liraglutide selubalulekile ekuphathweni kwesisindo, futhi umuthi awusetshenziselwa ukwelapha uhlobo lwe-mellitus yesifo sikashukela i-2. Kodwa-ke, i-Victoza yaziwa ngokwelashwa kwe-2 isifo sikashukela kanye nezinkinga zenhliziyo.
Umthamo womjovo we-Liraglutide kufanele uthathwe kuphela yizingane ezineminyaka okungenani eyishumi nangaphezulu. Noma iyiphi ingane ephansi kunaleyo akufanele inikezwe lesi sidakamizwa noma ngabe ikhombisa izimpawu ezingalashwa ngaleli peptide. Umuthi we-liraglutide wezingane ubuye ngokuya ngesimo sempilo eselashwa. Imithamo enconyiwe imi ngalendlela elandelayo;
Umthamo wezingane wohlobo lwesifo sikashukela i-2
Umthamo womjovo wokuqala we-Liraglutide wokujova yi-0.6mg, okufanele uthathwe kanye ngosuku okungenani isonto elilodwa. Ngemuva kwalokho, umthamo ungakhushulwa ube yi-1.2mg ngosuku, futhi uma ulawulo lwe-glycemic lungatholakali, umuthi ungalukhulisa udosi luye kwi-1.8 gm ngeviki elilandelayo. Umthamo omkhulu wezingane zesifo sikashukela sohlobo lwe-1.8mg ngosuku, kanti umthamo wokulungisa usukela ku-0.6mg uye ku-1.8mg ngosuku.
I-liraglutide nayo ingabelwa izingane ukusiza ekwelapheni kwezimo zezempilo ezahlukahlukene njengezinkinga ze-renal nezesibindi. Kodwa-ke, lapho welapha lezi zimo ezimbili, kufanele uthathe i-Liglutide ngokucophelela ngoba kungaholela emiphumeleni emibi lapho i-overdred. Akukho kulungiswa komthamo kunconyelwa lapho uthatha i-piraidi ye-liraglutide yezinkinga zesibindi noma ye-renal. Lapho uthatha umthamo we-liraglutide, wehlisa noma ikuphi ukungena kwe-insulin ukunciphisa ingozi ye-hypoglycemia.
Kwenzekani uma ngidlula ngokweqile?
Ukweqa noma yisiphi isidakamizwa akuwona umqondo omuhle futhi akufanele kukhuthazwe ngisho noma uthatha i I-Liraglutide umthamo wokunciphisa umzimba noma ukwelashwa kwanoma yisiphi esinye isimo sezempilo. Uyalwa ukuba unamathele njalo emiyalweni yemithamo enikezwe udokotela wakho. Ukweqa ngokweqile kuzoholela emiphumeleni emibi kakhulu, engase ibe nzima isimo sakho sempilo noma iholele kwezinye izinkinga zempilo. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi, ukweqisa ngokweqile kungaba ngumphumela wengozi noma ukusabela komzimba wakho kulo muthi. Imiphumela emibi ejwayelekile kakhulu yokwanda kakhulu ifaka phakathi isicanucanu esinamandla nokuhlanza. Uma uqaphela ukuthi uthathe umthamo omkhulu kunokunconywa, funa usizo lwezokwelapha ngokushesha okusemandleni akho. Ungathola futhi nodokotela wakho ukuthola usizo.
6. Iziphi izinzuzo zeLiraglutide?
Kuyo yonke le minyaka, uLiraglutide ukhombisile ukuletha izinzuzo ezingefani, ikakhulukazi emhlabeni wezokwelapha. Noma kunjalo, ungathola kuphela isilinganiso izinzuzo ze-liraglutide, uma unamathela emiyalweni yemithamo nokudla okufanele noma ukuvivinya umzimba njengoba utshelwe udokotela wakho. Nazi ezinye zezinzuzo ezaziwa kakhulu zeLiraglutide.
Ithuthukisa uhlobo lwe-2 sikashukela
Igama lomkhiqizo weLiraglutide i-Victoza selisetshenzisiwe futhi lamukelwa yi-FDA ekwelapheni uhlobo lwesifo sikashukela i-2. Umuthi uyasiza ekulawuleni ushukela wegazi emzimbeni wakho. Lapho amazinga kashukela ephezulu emzimbeni wakho, i-liraglutide ivuselela ama-pancreas akho ukuthi akhiqize i-enzyme eyengeziwe ye-insulin esiza ekuphambukiseni ushukela wegazi.
Usizo ekulweni nokukhuluphala kanye nesisindo somzimba
E-United States of America, i-FDA igunyaze iLiraglutide ukuthi ilashwe ngokweqile ngemuva kokukhombisa ukuthi iyasebenza ekucindezeleni isifiso sokudla kanye nokudla amakhalori okusize ekuphatheni isisindo somzimba. Ngokwesilinganiso, abesifazane baye babhekana nokuncipha kwesisindo uma bethatha isisindo se-liraglutide kunamadoda. Kodwa-ke, lokho akusho ukuthi amadoda ngeke asizakale kulo muthi. Ngomqondo ongcono wokulahlekelwa kwesisindo ngalesi sidakamizwa, ukudla okufanele nokuzivocavoca kufanele kuhambisane nomthamo.
Ivikela uhlelo lwe-Vascular
I-liraglutide ibonakale ibalulekile ekuvikeleni izicubu zenhliziyo yakho futhi yehlise nengozi yezifo zenhliziyo. Izifundo zobudokotela zibonisa futhi ukuthi ukuthatha i-liraglutide, izifo zenhliziyo ezithuthukile ezivela kuhlobo lwe-2 isifo sikashukela nokukhuluphala. Umuthi futhi uyasiza ekulinganiseni umfutho wegazi lakho, osiza ekuqiniseni impilo yakho yemithambo yegazi.
Lesi sidakamizwa kuthiwa futhi sinomthelela omuhle ekuthuthukiseni impilo yakho yobuchopho, sisize ekuphatheni ukukhathazeka, futhi singasebenza njengezengezo ezilwa nama-oxidant nezokulwa nokuvuvukala. Kokunye isifundo sezokwelapha, i-liraglutide ikhombisile ukuthi ingasiza abantu ababa umlutha wotshwala. Kodwa-ke i-liraglutide overdose ingakuveza ezinkingeni zempilo futhi yonakalise zonke izinzuzo ezilindelekile.
7. Kufanele unakekele imiphumela elandelayo / isixwayiso lapho usebenzisa i-Liraglutide
Cishe zonke izidakamizwa, lapho zisetshenziswa kabi noma zisetshenziswa ngokweqile zingakuveza emiphumeleni emibi kakhulu, futhi i-liraglutide ayihlukile. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi imiphumela emibi ingabangelwa yendlela umzimba wakho ophendula ngayo ku-liraglutide isisindo sokunciphisa umzimba. Abanye izixwayiso ze-liraglutide zijwayelekile futhi ziyanyamalala ngokuhamba kwesikhathi, kepha uma kwenzeka imiphumela elandelayo inganyakazi ngokuhamba kwesikhathi noma iba yimbi kakhulu, funa ukwelashwa;
Ikhala eligijimayo, ukukhwehlela noma ukuthunga
Ukutsha noma ubunzima ekuchameni
Amasayithi we-Liraglutide Injection rednessor rashes
Ukuqunjelwa kanye nokushiswa kwenhliziyo
Kunezexwayiso ezinzima kakhulu ze-liraglutide ezidinga ukunakekelwa ngokushesha kwezokwelashwa uma usuqala ukubhekana nazo, futhi zifaka;
Isikhumba ophuzi noma wamehlo
Uma uqala ukucabanga ngokubulala, ukuzilimaza wena noma abanye
Isicanucanu, umphimbo wokuvuvukala, ulimi, ubuso, amehlo noma umlomo.
Kunzima ukugwinya noma ukuphefumula.
Kulawa sina Imiphumela emibi yeLiraglutide, uyelulekwa ukuthi uyeke ukuthatha imithamo ngokushesha lapho ufuna usizo lodokotela.
8. Ukusebenzisana kwe-Liraglutide
Ukusebenzelana kwezidakamizwa kungathinta ukuthi umuthi wakho uzosebenza kanjani noma kukubeke engcupheni enkulu yokuthola imiphumela emibi kakhulu. Ngakho-ke, ngaphambi kokuqala ukuthatha umthamo we-Liraglutide, kubalulekile ukwazisa udokotela wakho nganoma yisiphi esinye isimo sezempilo ongaphansi kwemithi. Eminye imishanguzo ayikwazi ukusebenza ngokubambisana, futhi kuhle ukuthi udokotela wakho azi mayelana nanoma yimuphi omunye umuthi okungenzeka ukuthi uthatha kuwo. Ukuze ube sohlangothini oluphephile, ungaqali, shintsha umthamo noma uyeke ukuthatha noma yimuphi umuthi ngaphandle kokuxhumana nodokotela wezokwelapha.
Uyalwa ukuthi ungathathi lesi sidakamizwa nanoma yimuphi omunye umuthi oqukethe i-Liraglutide ngoba kungaholela ekweqiseni ngokweqile futhi udalule nemiphumela emibi kakhulu. Ngokuya ngesimo sakho sempilo, udokotela wakho uzokunikeza ilungelo Ukusebenzisana kwe-Liraglutide ukuthuthukisa imiphumela. Kunezidakamizwa eziningi ongazithatha kanye neLiraglutide njenge-acetohexamide, albuterol, cinoxacin ne-danazol, phakathi kwabanye abaningi.
9. Isipiliyoni Somtholampilo
Ngokuvumelana ne ukubuyekezwa kwe-liraglutide kumapulatifomu e-inthanethi ahlukahlukene, abasebenzisi abaningi banelisekile ngemiphumela kanye nezinzuzo abazitholile ngenkathi noma ngemuva kokudla umuthi. Izifundo zobudokotela zibonisa nokuthi umuthi ubusize kanjani ekwelapheni izimo zezokwelapha ezahlukahlukene ezinjengokukhuluphala, thayipha i-2 isifo sikashukela, izinkinga zezinso nasekuvimbeleni izifo zenhliziyo ezibangelwa yizimo zempilo ezahlukahlukene. Ukusebenzisana kwe-liraglutide nakho kufakazele ukuthi kunamandla ekwelapheni uhlobo lwesifo sikashukela i-2 ezinganeni okungenani ezineminyaka eyishumi.
Kodwa-ke, abanye abasebenzisi baye baba nesipiliyoni esibi nalesi sidakamizwa, kepha lokho kungabangelwa ukweqisa kwe-Liraglutide noma ukubekezelela umzimba. Izindaba ezimnandi ukuthi imiphumela emibi ye-liraglutide ingabuyiselwa emuva uma uthintana nodokotela wakho ngesikhathi esifanele. Indlela engcono yokugwema ukubhekana nemiphumela emibi ngenkathi uthatha lo muthi uya kohlolwa udokotela ngaphambi kokuqala umthamo wakho bese uvumela abeluleki ukuthi bakubekele umthamo ofanele. Kuyalule futhi ukuthi ulandele imiyalo yemithamo futhi wazise udokotela wakho nganoma yisiphi esinye isidakamizwa okungenzeka ukuthi uyaphuza.
Lesi sidakamizwa sesibonakalise ukuthi sibalulekile ezweni lezokwelapha ikakhulu ekwelapheni ukukhuluphala, thayipha isifo sikashukela se-2 nezinkinga zenhliziyo, phakathi kwabanye. I-Liraglutide powder (204656-20-2) iyathengiswa ezitolo ezahlukahlukene eziku-inthanethi, kepha uzokuthola ngamagama ohlobo lomkhiqizo onjengeSaxenda neVictoza. Kodwa-ke, qiniseka ukuthi uyakuqonda lokho uhlobo lomkhiqizo ngalunye olusetshenziselwa kona ngaphambi kokwenza i-oda lakho. Njengoba kushiwo ngenhla, igama lomkhiqizo ngamunye we-liraglutide lusetshenziselwa injongo ethile. I-Saxenda ivunyelwe ukunciphisa umzimba kanye nokwelashwa kokukhuluphala ngenkathi i-Victoza isetshenziswa ekwelashweni kwesifo sikashukela sohlobo lwe-2 kanye nezifo zenhliziyo ezibangelwa amazinga aphezulu kashukela. Kodwa-ke, landela imiyalo yemithamo yokugwema ukubhekana nemiphumela emibi yeLiraglutide.
Kungcono ukwenza ucwaningo olufanele mayelana nokwakho liraglutide buy umthombo ngaphambi kokwenza okuthengile. Namuhla kunabathengisi be-peptide abaningi emakethe, okwenza kube nzima kuwe ukwazi ukuthi ungawutholaphi umuthi osezingeni elifanele ozokuqinisekisa ngemiphumela emangazayo. Bheka ukubuyekezwa kwe-liraglutide kuwebhusayithi yomthengisi ukuze uthole umbono ophelele wemikhiqizo nokuthi umthengisi usebenza kanjani. Ukukhetha umphakeli onolwazi kakhulu futhi odumile we-liraglutide kuzokuqinisekisa ngezinsizakalo ezisezingeni kanye nemikhiqizo yezokwelapha esezingeni. Izindleko ze-Liraglutide ziyehluka kusuka kothengisa kwenye.
Akudingeki ukhathazeke ngalutho uma uthatha i-Liraglutide ngoba isidakamizwa esingokomthetho kanye nemiphumela engcono, faka umuthi wakho kulo lonke umjikelezo wemithamo.
Kaakeh, Y., Kanjee, S., Boone, K., & Sutton, J. (2012). I-Liraglutide ‐ ibanga ukulimala kwezinso okunamandla. I-Pharmacotherapy: Ijenali yeHuman Pharmacology kanye ne-Drug Therapy, 32(1), e7-e11.
UMarso, SP, Daniels, GH, Brown-Frandsen, K., Kristensen, P., Mann, JF, Nauck, MA,… & Steinberg, WM (2016). Imiphumela ye-Liraglutide nemithambo yegazi nenhlobo yesifo sikashukela se-2. I-New England Journal of Medicine, 375(4), i-311-322.
Lind, M., Hirsch, IB, Tuomilehto, J., Dahlqvist, S., Ahrén, B., Torffvit, O.,… & Sjöberg, S. (2015). I-Liraglutide kubantu belashelwa isifo sikashukela sohlobo lwe-2 ngemijovo yansuku zonke ye-insulin: Isivivinyo somtholampilo esingashintshiwe (isilingo se-MDI Liraglutide). Bmj, 351, h5364.
UDavies, MJ, Bergenstal, R., Bode, B., Kushner, RF, Lewin, A., Skjøth, TV,… & DeFronzo, RA (2015). Ukusebenza kwe-liraglutide yokuncipha kwesisindo phakathi kweziguli ezinesifo sikashukela sohlobo lwe-2: isifo sikashukela se-SCALE senziwe ngokungalingani ngokungahleliwe. Jama, 314(7), i-687-699.